Revhitiko 13 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
13 Zvino Jehovha akataura naMosesi naAroni, achiti: 2 “Kana munhu akabuda bundu kana kuti mhezi kana kuti chidzvanga+ muganda renyama yake, paganda renyama yake poita hosha yemaperembudzi,+ anofanira kubva aunzwa kumupristi Aroni kana kuti kune mumwe wevanakomana vake, ivo vapristi.+ 3 Mupristi anofanira kutarira hosha yacho iri paganda renyama yacho.+ Kana mvere dziri pane hosha yacho dzachinja kuva chena uye hosha yacho ichioneka kuti yakadzika pasi peganda renyama yake, ihosha yemaperembudzi. Mupristi anofanira kuitarira, uye anofanira kumuti haana kuchena. 4 Asi kana chidzvanga chacho chiri chichena paganda renyama yake uye chichioneka kuti hachina kudzika pasi peganda uye mvere dzacho dzisina kuchinja kuva chena, mupristi anofanira kubva aisa munhu ane hosha yacho kwake oga+ kwemazuva manomwe. 5 Mupristi anofanira kumutarira pazuva rechinomwe, uye kana hosha yacho ichiita sokuti yakapera, hosha yacho haina kupararira neganda, mupristi anofanirawo kumuisa kwake oga+ kwemamwe mazuva manomwe. 6 “Zvino mupristi anofanira kumutarira kechipiri pazuva rechinomwe, kana hosha yacho isingachanyatsooneki uye hosha yacho isina kupararira neganda, mupristi anofanirawo kumuudza kuti achena. Yaiva mhezi. Ngaageze nguo dzake ave akachena. 7 Asi kana mhezi yacho yanyatsopararira neganda iye akambozviratidza pamberi pomupristi akanzi akachena, anofanira kubva azviratidza kechipiri pamberi pomupristi,+ 8 uye mupristi anofanira kutarira; asi kana mhezi dzacho dzapararira neganda, mupristi anofanira kubva amuti haana kuchena. Iwo maperembudzi.+ 9 “Kana hosha yemaperembudzi ikabuda pamunhu, anofanira kubva aunzwa kumupristi. 10 Mupristi anofanira kutarira;+ kana paganda paine bundu jena, rachinja mvere kuva chena, uye bundu racho rikava nenyama tsvuku+ mukati maro, 11 iwo maperembudzi anoramba arimo+ muganda renyama yake; uye mupristi anofanira kumuti haana kuchena. Haafaniri kumuisa kwake oga,+ nokuti haana kuchena. 12 Zvino kana maperembudzi akanyatsobuda paganda, maperembudzi acho akafukidza ganda rose romunhu ane hosha yacho kubvira mumusoro make kusvikira kutsoka dzake zvinonyatsoonekwa nomupristi; 13 uye mupristi atarira akaona kuti maperembudzi acho afukidza nyama yake yose, anofanira kubva amuti akachena. Yose zvayo yachinja kuva chena. Iye akachena. 14 Asi pazuva rinooneka nyama yakatsvuka mairi, iye achava asina kuchena. 15 Mupristi+ anofanira kuona nyama yacho yakatsvuka, omuti haana kuchena. Nyama yakatsvuka haina kuchena. Iwo maperembudzi.+ 16 Kana nyama yakatsvuka ikadzokera panzvimbo yayo, ikachinja kuva chena, iye anofanira kubva auya kumupristi. 17 Mupristi anofanira kumutarira,+ uye kana hosha yacho yachinja kuva chena, mupristi anofanira kubva ati hosha yacho yakachena. Iye akachena. 18 “Asi kana nyama ikava nemota+ paganda rayo uye rikapora, 19 panzvimbo paiva nemota racho pakabuda bundu jena kana kuti chivara chakatsvukuruka, iye anofanira kubva azviratidza kumupristi. 20 Mupristi anofanira kutarira,+ uye kana richioneka kuti rakadzika pasi peganda racho uye mvere dzaro dzachinja kuva chena, mupristi anofanira kubva amuti haana kuchena. Iyo ihosha yemaperembudzi. Yakabuda nomumota. 21 Asi kana mupristi akaritarira, akaona kuti mukati maro hamuna mvere chena, uye kuti harina kudzika pasi peganda uye kuti harichanyatsooneki, mupristi anofanira kubva amuisa kwake oga+ kwemazuva manomwe. 22 Kana rikapararira neganda, mupristi anofanira kubva amuti haana kuchena. Iyo ihosha. 23 Asi kana panzvimbo paro pakabuda chidzvanga, harina kupararira, kuzvimba+ kwemota racho; uye mupristi anofanira kumuti akachena.+ 24 “Kana ganda renyama rikava nevanga rokutsva nomoto, nyama yakatsvuka yevanga racho ikava chidzvanga chakatsvukuruka kana kuti chakachena, 25 mupristi anofanira kubva achitarira; kana mvere dzacho dzachinja kuva chena pachidzvanga chacho uye chava kuoneka kuti chakadzika pasi peganda, iwo maperembudzi. Akabuda nomuvanga racho, uye mupristi anofanira kumuti haana kuchena. Iyo ihosha yemaperembudzi. 26 Asi kana mupristi akachitarira, akaona zvino kuti hapana mvere chena pachidzvanga chacho uye kuti hachina kudzika pasi peganda uye kuti hachichanyatsooneki, mupristi anofanira kubva amuisa kwake oga kwemazuva manomwe. 27 Mupristi anofanira kumutarira pazuva rechinomwe. Kana chanyatsopararira neganda, mupristi anofanira kubva amuti haana kuchena. Iyo ihosha yemaperembudzi. 28 Asi kana chidzvanga chacho chikaramba chiri panzvimbo yacho, chisina kupararira neganda uye chisinganyatsooneki, ibundu rechidzvanga chacho; mupristi anofanira kumuti akachena, nokuti kuzvimba kwevanga racho. 29 “Asi kana ari murume kana kuti mukadzi, kana hosha ikabuda pana iyeye mumusoro kana kuti pachirebvu, 30 mupristi+ anofanira kubva aona hosha yacho; kana ichioneka kuti yakadzika pasi peganda, bvudzi rakaita yero uye riri shoma pairi, mupristi anofanira kubva amuti haana kuchena. Iko kudonha bvudzi kusingawanzoitiki.+ Iwo maperembudzi omumusoro kana kuti epachirebvu. 31 Asi kana mupristi akaona hosha yokudonha bvudzi kusingawanzoitiki, uye ichioneka kuti haina kudzika pasi peganda uye pasina bvudzi dema pairi, mupristi anofanira kubva aisa munhu ane hosha yokudonha bvudzi kusingawanzoitiki kwake oga+ kwemazuva manomwe.+ 32 Mupristi anofanira kutarira hosha yacho pazuva rechinomwe; uye kana kudonha bvudzi kusingawanzoitiki kusina kupararira, uye pasina kuva nebvudzi rakaita yero pairi uye kudonha bvudzi kusingawanzoitiki+ kuchioneka kuti hakuna kudzika pasi peganda, 33 iye anofanira kubva aveurwa, asi ngaarege kuveura+ pane bvudzi rinodonha zvisingawanzoitiki; uye mupristi anofanira kuisa munhu anodonha bvudzi zvisingawanzoitiki kwake oga kwemazuva manomwe zvakare. 34 “Zvino mupristi anofanira kutarira kudonha bvudzi kusingawanzoitiki pazuva rechinomwe; uye kana kudonha bvudzi kusingawanzoitiki kusina kupararira neganda, kuchioneka kuti hakuna kudzika pasi peganda, mupristi anofanira kubva amuti akachena,+ uye iye anofanira kugeza nguo dzake ave akachena. 35 Asi kana kudonha bvudzi kusingawanzoitiki kukanyatsopararira neganda iye ambonzi akachena, 36 mupristi+ anofanira kubva amuona; uye kana kudonha bvudzi kusingawanzoitiki kwapararira neganda, mupristi haafaniri kuongorora kuti pane bvudzi rakaita yero here; iye haana kuchena. 37 Asi kana kudonha bvudzi kusingawanzoitiki kuchioneka kuti kwamira uye bvudzi dema rabuda panzvimbo yacho, kudonha bvudzi kusingawanzoitiki kwapora. Iye akachena, uye mupristi anofanira kumuti akachena.+ 38 “Asi kana ari murume kana kuti mukadzi, kana vakava nezvidzvanga+ paganda renyama yavo, zvidzvanga zvichena, 39 mupristi+ anofanira kubva atarira; uye kana zvidzvanga zvacho zviri paganda renyama yavo zvisinganyatsooneki, mapundu asingakuvadzi. Iwo akabuda paganda. Iye akachena. 40 “Asi kana ari murume, musoro wake ukava nemhanza,+ iyo imhanza. Iye akachena. 41 Kana musoro wake ukava nemhanza pamberi, imhanza yepahuma. Iye akachena. 42 Asi kana hosha chena yakatsvukuruka ikabuda pamhanza yepanhongonya kana kuti yepahuma, maperembudzi ari kubuda pamhanza yepanhongonya kana kuti yepahuma pake. 43 Mupristi+ anofanira kumutarira; uye kana paine bundu rehosha chena yakatsvukuruka pamhanza yake yepanhongonya kana kuti yepahuma pake yakaita semaperembudzi ari muganda renyama, 44 iye ane maperembudzi. Haana kuchena. Mupristi anofanira kumuti haana kuchena. Hosha yake iri mumusoro wake. 45 Kana ari munhu ane maperembudzi ane hosha yacho, nguo dzake dzinofanira kubvarurwa,+ musoro wake unofanira kuregwa wakati nyangarara,+ uye anofanira kufukidza usopo,+ oshevedzera kuti, ‘Handina kuchena, handina kuchena!’+ 46 Achava asina kuchena mazuva ose aanenge aine hosha yacho. Iye haana kuchena. Anofanira kugara ari oga. Nzvimbo yake yokugara ngaive kunze kwomusasa.+ 47 “Kana iri nguo, kana hosha yemaperembudzi ikabuda pairi, pangava panguo yemvere dzemakwai kana kuti panguo yerineni, 48 kana kuti pashinda dzinochinjika+ kana kuti patambo dzinodzika dzerineni nedzemvere dzemakwai, kana kuti padehwe kana kuti pazvose zvinogadzirwa nedehwe,+ 49 uye hosha yegirini yakada kuita yero kana kuti yakatsvukuruka ikava panguo kana kuti padehwe kana kuti pashinda dzinochinjika kana kuti patambo dzinodzika kana kuti chero pachinhu chakagadzirwa nedehwe, ihosha yemaperembudzi, inofanira kuratidzwa mupristi. 50 Mupristi+ anofanira kuona hosha yacho, uye anofanira kuisa chinhu chacho chine hosha kwacho choga+ kwemazuva manomwe. 51 Kana aona hosha yacho pazuva rechinomwe, kuti hosha yacho yakapararira nenguo yacho kana kuti neshinda dzinochinjika kana kuti netambo dzinodzika+ kana kuti nedehwe ringashandiswa kugadzira chero chinhu chipi zvacho icho ganda racho ringashandisirwa, hosha yacho ndeyemaperembudzi akaipa+ kwazvo. Chinhu chacho hachina kuchena. 52 Anofanira kupisa nguo yacho kana kuti shinda dzinochinjika kana kuti tambo dzinodzika dziri pachinhu chakagadzirwa nemvere dzemakwai kana kuti nerineni,+ kana kuti chero chinhu chipi zvacho chakagadzirwa nedehwe chingava nehosha yacho, nokuti iwo maperembudzi akaipa+ kwazvo. Chinhu chacho chinofanira kupiswa nomoto. 53 “Asi zvino, kana mupristi akatarira, akaona kuti hosha yacho haina kupararira nenguo yacho kana kuti neshinda dzinochinjika kana kuti netambo dzinodzika kana kuti nechinhu chero chipi zvacho chakagadzirwa nedehwe,+ 54 mupristi anofanira kurayirawo kuti vageze chinhu chacho chine hosha, uye anofanira kuchiisa kwacho choga kwemamwezve mazuva manomwe. 55 Mupristi anofanira kutarira hosha yacho pashure pokunge yagezwa, uye kana hosha yacho isina kuchinja ruvara rwayo asi hosha yacho isina kupararira, chinhu chacho hachina kuchena. Muchipise nomoto. Inzvimbo yakaita gomba, yakadyika pakangosara tambo nechepasi pacho kana kuti pamusoro pacho. 56 “Asi zvino, kana mupristi akatarira akaona kuti hosha yacho haichanyatsooneki pashure pokunge yagezwa, anofanira kubva abvisa pane hosha yacho panguo yacho kana kuti padehwe kana kuti pashinda dzinochinjika kana kuti patambo dzinodzika. 57 Zvisinei, kana ichiri kuoneka panguo yacho kana kuti pashinda dzinochinjika kana kuti patambo dzinodzika+ kana pachinhu chero chipi zvacho chakagadzirwa nedehwe, hosha yacho iri kubuda. Unofanira kupisa+ nomoto chero chinhu chipi zvacho chine hosha yacho. 58 Asi nguo kana kuti shinda dzinochinjika kana kuti tambo dzinodzika kana kuti chero chinhu chipi zvacho chakagadzirwa nedehwe chaungageza, kana hosha yacho yabva pazviri, chinhu chacho chinofanira kubva chagezwa kechipiri; uye ngachive chakachena. 59 “Uyu ndiwo mutemo wehosha yemaperembudzi inenge iri panguo yemvere dzemakwai kana kuti yerineni,+ kana kuti pashinda dzinochinjika kana kuti patambo dzinodzika, kana kuti pachinhu chero chipi zvacho chakagadzirwa nedehwe, kuti chinzi chakachena kana kuti chinzi hachina kuchena.”